Plus Size Long Maxi Bohemian Dresses - Buddhatrends
$32.40 $54.00 Manavotra 40% ($21.60)
Omeo ny vatanao ny fahamendrehana mendrika azy! Noforonina avy amin'ny harena vita amin'ny polyester misy kofehy marevaka, io akanjo lava Plus Maxi Bohemian Maxi io dia mampisongadina ny hetsika ataonao, manome ny dingana rehetra azonao ny fahatsiarovan-tena sy ny volamena.
Amin'ny UK16 aho matetika, noho izany dia hitako fa voavaha ny 3XL. Mety mila manao fanovana kely kely àry izy. Mahafinaritra ny lamba.
fitafiana aho dia tena tsara tarehy, angamba i Lil ho ahy ... tsy afaka mandidy kely kely
K ****** ny A.
Akanjo tena tsara tarehy, mahafaly ahy ny mandidy amina safidy fa tsy fahampian-bolshemirit
L *** ny G.
Ny toetra dia tsara
E ******* ny A.
Tonga ihany ny farany, miandry ny voalohan'ny volana Martsa. ny hatsaran-toetra dia tena tsara !!! misaotra mpivarotra! Misaotra anao!
J *** ny S.
Tany am-boalohany dia nentina toy ny tora-pasika, saingy tamin'ny fiovàna kely dia ny fanoloana fantson-tonta ho an'ny lava kokoa, ary ny fehikibo-nivadika ho ivelany
V ****** ny V.
ANDRIAKAKY Ô!!! Ity akanjo ity dia tsara tarehy irl. Mahavariana ny dantelina ary natolotr'ilay mpivarotra tao anatin'ny herinandro 2. Faly be aho ary tena te handevozina ankehitriny mba hahafahako mampiasa izany. Manoro avo dia avo amin'ny mpivarotra.
Lehibe loatra ny akanjo.
L *** ny
Tsara ery. Tena tsara. Ary ... tena lehibe. Na dia ny ankizivavy goavambe aza dia mahatsiaro tena kely.) Ny fahadisoako. TSY azonao ny habeny lehibe, mety ho iray kely kokoa. Na izany aza, tsara kokoa izany fomba izany =) Vetivety tokoa dia tonga teto Finlandy, andro 14 ihany. Misaotra mivarotra!
Marina tokoa ny habeny
M **** ny W.
Tonga soa aho
Naka akanjo faharoa avy amin'ity mpivarotra ity. ny tsara dia tsara,
Dress is cute, very delicate, recommended !!!
Ny akanjo no mahafinaritra indrindra q amin'ny sary. Ny hatsaranao dia tsara. ny habeny dia mifanaraka amin'ny fepetra nomena
Fandefasana herinandro 2. zavatra mahafinaritra, fa tena malemy. Prodovtsa recommended
Ny akanjo tsara dia kely lehibe ho ahy, fa hanao fanomezana tsara ho an'ny namana. Tsara toetra
Akanjo goavam-be, tsara daholo ny zava-drehetra, safidy tsara hanaovana fialan-tsasatra
Vita tsara! toy ny sary!
Misaotra betsaka noho ilay akanjo tonga tamin'ny fotoana hanaovana ny fampakaram-bady sy ny akanjo lavorary
Tsy tonga tany amin'ny enta-mavesatra aho. nanokatra fifandirana, namaly ilay mpivarotra avy eo ary namerina ilay vola tamin'ny fialantsiny. Fa ny kintany 5 ihany no ampiasaina.
Asan-trompetra sy lambam-pandriana $42.00 $60.00